Iirisidi, izibonelelo kunye nendlela yokuzibandakanya ekutyeni Discover ️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuthandwa ngabanye, ukuzondwa ngabanye: i-raisin inengxabano. Ngokusondela kokuphela kwemibhiyozo yonyaka, iinethiwekhi zentlalo zithetha ngayo kwakhona. Kodwa, ngapha koko, iphilile?
Eyaziwa ngokuba ziiviniga kuphela, ingumfuziselo ofakwe isitampu kwizidlo sangokuhlwa ze IKrismesi. Ngenxa yokuba inencasa eswiti, iyathandwa ngabalandeli bezona zinto zimnandi ziphathwayo.
Ukongeza, inokudliwa yodwa, kodwa inokongezwa kwiindlela zokupheka ezahlukeneyo.
1 Yintoni iirisenty?
2 Iipropathi zesondlo seediliya
3 Izibonelelo zeerasintyisi
3.1 Ukugqwesa kwimpilo yamathumbu
3.2 Impilo entle yethambo
3.3 Ukuthintela i-anemia
3.4 Amajoni omzimba omeleleyo
4 Ungazitya njani iirisini
IiRisinsins azikho nje iidiliya, kude kube lelo xesha kwimeko yazo yendalo, eyomileyo neyomileyo. Inenqanaba eliphezulu le-fructose kunye ne-glucose, iyenza ibe mnandi kakhulu. Ngapha koko, ingumthombo olungileyo wefayibha, ke inokuba yinto elungileyo kwimpilo yakho yokusebenza kwamathumbu kunye nokusebenza. Ikwabonelela ngamandla kunye nee-antioxidants.
Iipropathi zesondlo seediliya
Ukongeza kwezi zinto sele zikhankanyiwe, isiqhamo sityebile kwizimbiwa ezahlukeneyo, eziyimfuneko kwimpilo entle. Ayisiyiyo kuphela, iqulethe i-arginine, i-amino acid esisiseko. Ukongeza, ityebile ngentsimbi.
Ukugqwesa kwimpilo yamathumbu
Egqwesileyo ukuze kuphele ukuqhina, ityebile ifayibha, echaza izibonelelo zayo kwimpilo yamathumbu. Ayisiyiyo kuphela, ukusetyenziswa kweediliya zezona zinto ziluncedo olukhulu ekulahlekeni kobunzima, kuba ivelisa imvakalelo yokuhlutha.
Impilo entle yethambo
Sisityebi kwi-calcium, esi siqhamo ngumhlobo wempilo yethambo. Ayisiyiyo kuphela amathambo afuna le minerali, kodwa kunye namazinyo.
Okokuqala, i-anemia sisiphumo sokungabikho kweeseli ezibomvu zegazi okanye iiseli ezibomvu ezingasebenziyo emzimbeni, ezibangela ukunciphisa ukuhamba kweoksijini kumalungu. Ukuthintela ukubandezeleka kule meko, ukutya iziqhamo, okuninzi ngentsimbi, yeyona ndlela yokuphuma.
Amajoni omzimba omeleleyo
Ukongeza, iyanceda ukomeleza ukhuseleko komzimba. Sisityebi kwii-antioxidants (i-flavonoids, i-phenols kunye ne-polyphenols, umzekelo), iikhompawundi ezinceda ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative, ukuphelisa ii-radicals zasimahla kunye nokuthintela ukonakala kweseli, kuyanceda ukomeleza amajoni omzimba.
Ungazitya njani iirisini
Ingatyiwa yodwa, njengokutya okulula kunye okumnandi, kodwa inokufumaneka ngokulula kwiindlela zokupheka ezahlukeneyo, ngakumbi ezo ziqhelekileyo kwimibhiyozo yoNyaka oMtsha.